အလွန်ပါးလွှာသောမျက်နှာပြင်ပါသည့် Android စမတ်ဖုန်းအသစ် Maze Alpha Androidsis
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်ကကဲ့သို့ပါးလွှာသော bezels ပရိတ်သတ်များအတွက်ကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်များထုတ်လွှင့်ခြင်းကြောင့်အတော်လေးကောင်းမွန်ခဲ့သည် Xiaomi က Mi Mix သို့မဟုတ် Samsung ရဲ့ Galaxy S8။ ယခုတွင်အခြားစမတ်ဖုန်းတစ်ခုသည်ဤလမ်းကြောင်းသို့ဝင်ရောက်မည်ဟုထင်ရသည်။
Maze သည် Alpha ဟုခေါ်သောမိုဘိုင်းဖုန်းအသစ်စတင်ရန်ပြင်ဆင်နေသည့်တရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီတွင်လက်ရှိရှိသည် အာလဖများအတွက်တိုယိုတာစာမျက်နှာသို့သော်ကံမကောင်းစွာဤအချက်မှာမှ လွဲ၍ ဤစာမျက်နှာသည် terminal နှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များစွာမပြပါ ၎င်းတွင်မည်သည့်ဘောင်များမျှခဲယဉ်းပြီးကင်မရာနှစ်လုံးတပ်သည် နောက်ကျောမှာ။
ဖြစ်နိုင်သမျှ Maze Alpha သတ်မှတ်ချက်များ
မကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သောပေါက်ကြားမှုများကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည် အီဗန် Blass တွစ်တာတွင်လာမည့် Maze Alpha သည် operating system ကိုယူဆောင်လာလိမ့်မည် Android 7.1 Nougat သည် ၆ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့် Full HD resolution တို့နှင့်အတူ (1920 x 1080 pixels) နှင့် Gorilla Glass4ကာကွယ်မှုကိုရရှိသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ terminal တွင်ရှစ်ခုပရိုဆက်ဆာ၊ ၄၀၀၀ mAh ဘက်ထရီနှင့်ကျောဘက်တွင်ကင်မရာနှစ်လုံးပါရှိသည် Sony အာရုံခံကိရိယာနှစ်ခုအဲ့ဒီထဲကတစ်ခုက 13 megapixels ပါ။
ဒါ့အပြင် Maze Alpha ရဲ့မူကွဲနှစ်မျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ် 4GB RAM နှင့် 64GB သိုလှောင်ရန်နေရာနှင့်အတူအခြား 6GB RAM နှင့် 128GB တို့ဖြစ်သည် အောက်ပါဆင်တူသိုလှောင်မှုအဘို့ Xiaomi Mi6နှင့် Mi6Plus.
အခုအချိန်မှာ Maze Alpha ဖြန့်ချိသည့်နေ့၏သတင်းအချက်အလက်မရှိပါ သို့မဟုတ်၎င်း၏စျေးနှုန်းအလားအလာရှိသော်လည်းကုမ္ပဏီအနေဖြင့် terminal ကိုရည်စူးထားသောစာမျက်နှာ၊ ရိုးရိုးစာသားတို့ကိုပင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီးပြီဆိုပါက၎င်း၏ဖြန့်ချိမှုကမလွယ်ကူသေးချေ။
ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ခဲ့သည့်ဓာတ်ပုံများအရလက်ဗွေအာရုံခံကိရိယာသို့မဟုတ်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုသိုလှောင်ရန်အနိမ့်ဘောင်ပိုထူနိုင်သော်လည်း၊ Mi ရောစပ်စတိုင်ဖြစ်သည်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » ပါးလွှာသောအပိုပါးလွှာသည့် Android စမတ်ဖုန်းအသစ် Maze Alpha
Xiaomi က Mi ရော။ Samsung Galaxy S8 နှင့် S8 Plus no; သင်တိုင်းတာမှုများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ထုတ်လုပ်သူကသတိမရှိသောစားသုံးသူအပေါ်ချမှတ်ရန်ကြိုးစားသည့်လှည့်စားမှုကိုရပ်တန့်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာရှက်စရာပါပဲ
Android အတွက်အကောင်းဆုံး equalizer အက်ပ်များ